Qaaradaha Jarmalka, Magacyada Qaaradaha Jarmalka
Asxaabta qaaliga ah, waa maadada aan bari doono. Qaaradaha Jarmalka waxay noqon doontaa. Koorsadan, oo ka mid ah mowduucyada ugu horreeya ee bilowga ah inay bartaan Jarmalka, waxaad ku baran doontaa u dhigma Jarmal ee aad u baahan tahay inaad ogaato markaad booqanayso dalal kala duwan ama aad la sheekeysanayso dadka ajnebiga ah ee aad kula kulanto deegaan ku saabsan dalkooda iyo luqadaha lagu hadlo iyaga by.
Dalalka Jarmalka iyo Luqadaha Waxaan ku bari doonaa casharada aan ku bari doono ciwaanka hoostiisa oo ah casharo gooni ah sida ku cad qaaradaha wadamada. Waxaan dooneynaa inaan ku xoojino koorsadan adigoo soo bandhigaya su'aalaha laga weydiin karo mowduucan ka hor inta aan la siinin liiska magacyada dalka, jinsiyadaha iyo luqadaha
Xagee dagantahay / Xaggee baad tahay?
Waxaan ku noolahay / Ich wohne in…
Xagee ka imaaneysaa / Woher kommst du?
Waxaan ka imid / Ich komme aus ...
Waxaan ku soo qaadan doonnaa ereyada muhiimka ah ee u baahan in laga ogaado mowduuca aan ku soo qaadan doono casharkaan iyo macnahooda hoos. Si aad ugu fududaato, waxaan ku siinaynaa weedho muunad ah oo ku saabsan ereyada cusub ee aad barteen. Adiga ayaa soo saari kara tusaalooyinka naftaada.
Eraybixinta Jarmalka Waxaa loola jeedaa af Turki
dhinto Welt → World
qaaradda → Qaarad
das land → dalka
murugo ku dhinto → afka
dhinto Nationalität → Milliyet
Jumlado Muunad ah
Magaca Magaca unseres Planeten ist Diiray / Dhulkeenna waxaa la yiraahdaa dhul.
Es gibbt 7 Qaarad auf der Welt. / Waxaa jira 7 qaaradood oo adduunka ah.
dalalka sprechen verschiedene luqadood. / Wadamada waxay ku hadlaan luuqado kala duwan.
Jedes Land line seine eigene Jinsiyada / Dal kasta wuxuu leeyahay jinsiyaddiisa.
Dalalka Jarmalka iyo Luqadaha Hoos waxaad ka heli kartaa magacyada qaaradaha iyo waxa u dhigma Jarmalka-Turkiga, oo aan si gooni ah ugu taxi doonno koorsooyinkeena socda.
das Nordaamerica Waqooyiga Ameerika
das Sudamerica Koonfurta Ameerika
das Antarctica Jacaylku
das Australiyaan Australia
Saaxiibbada qaaliga ah, waxaan jeclaan lahayn inaan kuula socodsiinno qaar ka mid ah waxyaabaha ku jira boggeena, marka laga reebo mowduuca waddamada Jarmalka iyo luqadaha, waxaa sidoo kale jira mowduucyo ay ka mid yihiin kuwa soo socda oo ku saabsan degelkeenna, waana kuwan mowduucyada ay tahay inay bartayaasha Jarmalku ogaadaan .
Ha iloobin inaad hubiso casharradeena kale.